Filtrer les éléments par date : dimanche, 07 juin 2020
dimanche, 07 juin 2020 20:12
Sandambola: Tsy nitsaha-nitotongana ny « Ariary » niohatra amin’ny « Euro » tamin’ity herinandro ity
4 248,85 Ariary no takalon’ny 1 Euro, ary io no fitontonganana be indrindra niseho tato anatin’ny iray volana izao.
dimanche, 07 juin 2020 19:33
Mpiasa Malagasy tany Koweït: Misy 164 no higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato rahampitso
Teratany Malagasy miisa 164 niasa tany Koweït no nekena hody an-tanindrazana. Miisa 164 izy ireo no higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato rahampitso Alatsinainy 8 jona tolakandro.
Hatoka-ponenana avy hatrany izy ireo ka hotely roa no hametrahana sy hanaraha-maso ara-pahasalamana azy ireo mandritra ny 14 andro.
Ny OIM (Organisation internationale pour les migrations) sy ny OIT (Organisation internationale du Travail) no nanamora ny fampodiana azy ireo an-tanindrazana.
dimanche, 07 juin 2020 16:41
Toamasina: Nizara voninkazo ho an'ireo Reny, sy arotava ho an'ny olom-pirenena ireo vehivavy mpitandro filaminana
Nanolotra voninkazo ho an'ireo renim-pianakaviana teto Toamasina ireo vehivahy mpitandro ny filaminana amin'izao fankalazana ny fetin'ny reny izao, ary arotava ho an'ireo olom-pirenena ho fiarovana azy ireo amin'ilay valan'aretina Covid-19.
Nialoha io hetsika nitetezana tanàna io dia nahazo anjara voninkazo sy arotava ho azy ireo teo anoloan'ny Lapan'ny tanànan’i Toamasina ny lehilahy ao amin’ny Tafika, Zandary sy Pôlisy.
dimanche, 07 juin 2020 16:30
Anorotsangana-Ambanja: Nogiazana ny botry iray tratra nitatitra hazo sarobidy
Hazo sarobidy 300 isa notaterina botry iray no saron’ny mpanao fisafoana tao Anorotsangana, Distrika Ambanja nifarimbonan’ny sampandraharahan’ny tontolo iainana sy fandrosoana lovainjafy ny avy amin’ny prefektiora, ny fikambanana ary mpitandro ny filaminana.
Nogiazana ao Ankify ilay botry ary efa ampanaovana ny fanadihadihana ny tompon'andraikitra amin’izao.
dimanche, 07 juin 2020 16:17
Michael Jordan: Hanolotra 100 tapitrisa dolara hanohanana ny ady amin’ny tsy fitoviana
Nanohina ny fon’ny maro, niteraka hatezeram-bahoaka tany Etazonia mihitsy aza, ary nampisy hetsika tamina tanan-dehibe maro sy firenena hafa koa ny herisetra nataon’ny Polisy amerikana iray tamin’i George Floyd, lehilahy mainty hoditra, ka nahafaty an’ity farany.
Noho iny tranga iny dia nanapa-kevitra i Michael Jordan, kintan’ny baskety amerikana, fa hanolotra 100 tapitrisa dolara ao anatin’ny folo taona ho avy hanohanana ireo fikambanana samihafa miady amin’ny tsy fitoviana, ka hanana anjara toerana lehibe amin’ny hampiasana io vola io ny fanabeazana.
dimanche, 07 juin 2020 15:42
Sambava: Hiverina ny fampianarana amin’ny kilasy rehetra amin’ireo sekoly tsy miankina
Nandray fanapahan-kevitra ny sekoly tsy miankina eto Sambava fa hiverina hianatra ny kilasy manontolo manomboka amin'ny Alatsinainy 8 jona ho avy io araka nambara tao anaty fivorian’ny Ray aman-dreny izay totoafo samy nanao ny azy ny sabotsy 06 jona.
Samy manana ny paikadiny ireo sekoly, ao ny hizarana ny mpianatra ka ao anatin'ny herinandro dia in-telo miverina any an-tsekoly, ao ny nandray fanapahan-kevitra fa ny Ray aman-dreny ihany no mandray ny « devoir » dia any an-trano ny ankizy no manao azy, ao kosa ny nanapa-kevitra fa ny mpampianatra no hitsinjara isan-trano alefa isaky ny kartie dia mifanome fotoana amin’ny tokantranon’ny Ray aman-dreny fa tsy any an-tsekoly no manao « cours ».